Welcome to Taungoo Blog: Ask Me! နဲ့ ရှင်းလင်းချက်
Ask Me! နဲ့ ရှင်းလင်းချက်
မသီကျူးနိုင်သေးပါဘူးဗျာ။ Ask Me! နဲ့ နည်းနည်းအလုပ်ရှုပ်နေလို့။
ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ သုံးနေတဲ့ပုံစံကို ကျွန်တော်စိတ်တိုင်းမကျသေးဘူးလေ။ အဲ့ဒီအတွက် နောက်တစ်မျိုးထပ်ပြီး စီစဉ်နေလို့ ကျနော်တောင် Beta - စမ်းသပ်အဆင့်လို့ နံမည်ပေးခဲ့၊ သမုတ်ခဲ့သေးတယ်။
အခုတလော Improvement တွေချည်းပဲ ရေးနေ၊ လုပ်နေရလို့ တခြားစာတွေတောင် ဘယ်ရောက်နေမှန်းကို မသိဘူး။ အခုလုပ်ထားတဲ့ Ask Me! (Beta) ကိုဘာလို့ မကြိုက်လဲဆိုတော့ အက်ဒမင်ကွန်ထရိုးမပြည့်လို့ပါ။ ဒါကြောင့် အခုဆိုရင် FAQ manager ကို ပြန်လည်မွမ်းမံထားတဲ့ Ask Me! ကိုသာသုံးဖို့ စီစဉ်လိုက်ပါတယ်။ (ဒီအတွက် အင်စတောလုပ်ပေး/ကြော်ငြာဘန်နာတွေကိုဖျောက်ပေး/အစစအရာရာကူညီပေးတဲ့ ကိုကိုရဲ ကို အထူးပင်ကျေးဇူးတင်လိုကြောင်း ပြောကြားချင်ပါတယ်။)
ကဲ .. ရှင်းလင်းချက်ကို စရအောင် .........
ဘာ့ကြောင့်ရှင်းလင်းချက်ထုတ်ရတာလဲဆိုရင် Ask Me! မှာ ကျွန်တော်ကြည့်လိုက်တော့ တော်တော်များများ မေးထားတာတွေကို တွေ့ရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော်တို့ ရည်ရွယ်ချင်တဲ့ ပေါ့ပေါ့ပါးပါး မကဘူးဖြစ်နေတယ်။ ဘယ်လိုတွေဖြစ်နေသလဲဆိုတော့
တချို့က Comment လို့ခေါ်တဲ့ မှတ်ချက်နဲ့ ရောထွေးနေတတ်တယ်။ မှတ်ချက်သဘောက စာတစ်ပုဒ်၊ စာတစ်ပိုဒ်၊ စာတစ်ကြောင်းအပေါ်မှာ စာဖတ်သူဟာ စာရေးသူအပေါ်ကို တိုက်ရိုက်ပြောချင်တဲ့စကား လို့သက်ရောက်ပါတယ်။ Ask Me! က ထိုကဲ့သို့မဟုတ်ပါ။
တချို့က Greeting လို့ခေါ်တဲ့ ပဋိသန္ဓာရစကားတွေရေးထားတတ်ကြတယ်။ “မတွေ့တာကြာပြီတို့ .. လည်လည်လာသွားတယ်တို့ ...” ဘလော့ဂါတွေရဲ့အခေါ်အရ စီပုံး (C box or Shout Box) နဲ့ ရောထွေးသွားတတ်ပါတယ်။
တချို့က ပဟေဠိတွေလာမေးထားကြတယ်။ လုံးလုံးကို ကွဲပြားပါတယ်။ ကိုယ်ကအဖြေသိတယ်။ တခြား တစ်ယောက်ကို အဖြေသွားမေးတယ်။ စကားဝှက်တယ်။ ဒါတွေနဲ့ Ask Me! နဲ့မတူပါ။ Ask Me! ကို မိတ်ဆွေက မသိသေးတဲ့ / သိချင်တဲ့ မေးခွန်းတွေ မေးပေးဖို့ပါပဲ။
တချို့ကျပြန်တော့ အမေးမဟုတ်၊ အဖြေမဟုတ်တွေ။ ဒါတွေလည်း မဖြစ်သင့်သေးပါဘူး။
ဒါ့ကြောင့် ကျွန်တော်အခု ရှင်းလင်းချက်ထုတ်လိုက်တာပါ။ ကျွန်တော်နားလည်သလိုမျိုး တခြားသူနားလည်အောင် ကျွန်တော်လုပ်နိုင်စွမ်းနည်းနေသေးလို့ပါ။ ဒါတွေအားလုံးကို ကျွန်တော်နားလည်ပါတယ်။ အထိအတွေ့နည်းသေးတဲ့ / လုံးဝမတူတဲ့ မမြင်ဖူးကြမယ့် အခြေအနေတစ်ရပ်ကို ထူထောင်လိုက်တာကိုး။ ကျွန်တော် ရေဒီယို အစီအစဉ်တစ်ခု ထပ်လုပ်ဖို့ရှိသေးတယ်။ အဲ့ဒါကတော့ ဒီတစ်လကုန်မှ ဖြစ်ဖို့များမယ်။
Ask Me! မေးခွန်းလေးတွေကို ဘယ်လိုမျိုးဖြစ်ချင်သလဲဆိုတော့
မေးချင်တဲ့မေးခွန်းက လိုရင်းတိုရှင်းဖြစ်ရပါမယ်။ (အခုမေးသွားတဲ့အထဲမှာ - “ကြက်ဥနဲ့ကြက်မ ဘယ်ဟာအစလဲဗျာ” ဆိုတာကို သဘောကျပါတယ်။ ဖြေတဲ့သူလည်း ပေါက်ကရပြန်ဖြေနိုင်တာပေါ့)
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Ask Me! က နိုင်ငံရေး၊ လူမှုရေး စတဲ့ အပြုသဘောတွေ မပါပါ။ အဲ့လိုမျိုး မေးခွန်းတွေက အင်တာဗျူးသဘောသက်ရောက်ပါတယ်။ နောက်ပိုင်းကျမှ ထည့်မယ့်အစီအစဉ် တစ်ခုပါ။
ဖြစ်နိုင်ရင် ဗမာလိုပဲ ရေးသားစေချင်ပါတယ်။ ဘားဂလိ (Burglish) နဲ့ မေးခဲ့ရင် ပြန်ဆိုတဲ့အခါမှာ အကျအနကောက်တာ မှားယွင်းနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် အတတ်နိုင်ဆုံး အင်္ဂလိပ်ဖြင့်ရေးသားခြင်းများ ရှောင်ရှားစေလိုပါတယ်။ (ဖြေတဲ့အခါကျရင် ပျော်စရာမကောင်းနိုင်တော့လို့ပါ)
ဒါပါပဲ .. တော်ကြာ စည်းကမ်းတွေကများလှချည်လားဆိုပြီး မရေးကြဘဲနေဦးမယ်။
ကဲ.. နမူနာကို ကြည့်ရအောင်...
Your Name - မိတ်ဆွေရဲ့နံမည်လေးကိုဖြည့်လိုက်
Email - မိတ်ဆွေရဲ့အီမေးလ်လိပ်စာလေးကိုဖြည့်လိုက်
Category - သူကတော့ မေးခွန်းမေးမယ့် နေရာကိုပြောတာ (လောလောဆယ် ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင် ပဲရှိသေးတယ်)
Question - မိတ်ဆွေမေးချင်တဲ့ မေးခွန်းခပ်တိုတိုလေးပဲဖြည့်လိုက်
ဒါပြီးရင်တော့ "Submit" လေးကိုနှိပ်ပြီးပို့လိုက်
ကဲ... ဘယ်လောက်ရိုးရှင်းပြီး လွယ်လိုက်သလဲလို့.........
ကျွန်တော်တို့အဖြေကို ဒီရက်ပိုင်းအတွင်း ထုတ်ပေးပါ့မယ်။ အားပေးတဲ့ မေးမြန်းကြတဲ့အတွက်လည်း ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။